स्वतन्त्र उम्मेदवार पाठकको तिब्र चुनाबी अभियान – Bihani Online
२५ कार्तिक २०७४ १९:३३ November 11, 2017 bihani
बाँके क्षेत्र नं. ३ प्रदेश सभा ख का स्वतन्त्र उम्मेदवार बिजय पाठकले आफनो चुनाबी अभियानलाई तिब्र पारेका छन । अभियान अन्र्तगत उनले मतदाता भेटघाट र पर्चा पम्पलेट बितरणलाई पनि तिब्रता दिएका छन । चुनाबी अभियान अन्र्तगत परसपुर र खजुरामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी उनी मतदाता भेटघाटमा ब्यस्त छन ।
परसपुर, जयसपुर साईगाँउ ईन्द्रपुर बेलहरी गनापुर लगाएतका मतदाताहरु संघ घर दैलो सकिसकेका पाठक शनिवार देखी खजुरा गाउँपालीकाको १ देखी ४ नं. वडाका मतदाताहरु संग घरदैलो भेटघाटमा ब्यस्त रहेको बताए ।